को हुन् सामाजिक संजालमा भाईरल यी युवती? यसरी हुदैछ फेसबुकमा ‘क्रस’ र ‘ट्रोल’ (फोटो सहित) - Purbeli News
को हुन् सामाजिक संजालमा भाईरल यी युवती? यसरी हुदैछ फेसबुकमा ‘क्रस’ र ‘ट्रोल’ (फोटो सहित)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ १०, २०७५ समय: १९:५४:४१
ईटहरी/ पछिल्लो समय सामाजिक संजालमा भाईरल हुने ट्रेन्ड निकै बढिरहेको छ । दिनप्रतिदिन सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताको संख्या वृद्धि भैरहेको परिवेशमा हालै एक युवती भाईरल भैरहेकी छिन् । सामाजिकमा कुनबेला को भाईरल हुन्छ भन्ने आकलन गर्न सकिँदैन ।
जुनसुकै परिवेश वा जुनसुकै क्षेत्रका जो कोहि पनि यो डिजिटल दुनियामा भाईरल हुन्छन् । हाल फेसबुकका ग्रुपहरुमा निकै हिट भैरहेकी छिन भारतको देवी चित्रलेखा । उनलाई ‘देवीजि’ भनेर चिन्छन । उनको घर भारतको हरियाणामा हो । आस्था च्यानलको एक भजन कार्यक्रममा लाईभ भजन कथा बाचन गर्दै गरेको तस्बिरहरू यतिबेला भाइरल भएको हो । भाईरल मात्र हैन उनको तस्बिर राख्दै ‘क्रस’ ट्रेन्ड समेत चलिरहेको छ ।
देश तथा बिदेशका भजन कार्यक्रमहरुमा कथा बाचन गरेर निकै लोकप्रिय रहेकि देवी विशेषगरि श्रीमद भागवत कथा पढ्छिन । उनले भारत संगै युएसए, क्यानडा, युके लगायतका देशहरुमा कथा बाचन गरिसकेकी छिन् । अहिले सामाजिक संजालमा लोकप्रिय मात्र हैन फेसबुकमा उनको पेज लाईक गर्नेको संख्या मात्र १२ लाख ७३ हजार बढी छन् । उनको तस्बिर भाइरल भएपछि केहिले फोटोसपबाट अनुहार बिगारेर ट्रोल समेत बनाएका छन् ।